တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: ကိုယ်ပိုင် PDF ဖိုင် ပြုလုပ်နည်း
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို မေးလ်ထဲမှာလည်း အကိုတစ်ယောက် တောင်းထားတာလည်း ရှိတာနဲ့ ပြီးရင် တစ်ခြား မသိသေးတဲ့ သူတွေလည်း သိသင့်တယ် ထင်လို့ ရေပေးလိုက်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ PDF File တစ် File ကို သေသေ သပ်သပ်လေးနဲ့ ပြုလုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ကျွန်တော် အခုအသုံးပြုနေတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ပြန်ပြီးတော့ မျှဝေပေးသွား ပါမယ် .. PDF File ထုတ်ဖို့အတွက် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ Microsoft Office Version တစ်ခုခုကို Install လုပ်ပေးထားရပါမယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ Microsoft Office 2010 ကိုအသုံးပြုပြီး ရေးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အရင်ဆုံး PDF ထုတ်ဖို့ အတွက် မိမိတို့စက်မှာ Microsoft Office ကို Install လုပ်ပြီသား ဆိုရင် နောက်ထပ် PDF Creator လေးကို Install လုပ်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော် PDF Creator လေးကို အောက်မှာတင်ပေး ထားပါတယ် .. PDF Creator ရှိမှသာ PDF ဖိုင် တစ်ဖိုင်ကို အလွယ်တကူနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. PDF Creator ကို Install လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် Microsoft Office Word ကိုဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင်တော့ ဆက်လုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ..
Apply >> OK ပေးပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Footer ပုံစံကိုရွေးပေးပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်နေတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် .
အပေါ်ကပုံအတိုင်း ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ PDF File တစ် File ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
မူးရင်း site >>>>> phyoly
ကျွန်တော်လည်း သူများဆီကနေ လေ့လာရင်းနဲ့တွေ့လို့ပြန် share ပေးလိုက်တာပါဗျာ။
Posted by အောင်မျိုး at 7:37 PM